အဆိုပါ PLUG-IN ကိုအော်ပရာကို CONFIGURE လုပ်နည်း - တေးသံစုံကဇါတ် - 2019
WhatsApp ကို၏အဆင်ပြေစေရန်နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုကျယ်ပြန့်သောတမန်နှင့်၎င်း၏ပရိသတ်ကို၏လျင်မြန်စွာကြီးထွားဖို့ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစနစ်၏တစ်ဦးထက်ပိုဘီလီယံကိုသုံးစွဲသူများကအနက်ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်အတူလူဝန်ဆောင်မှုကတဆင့် data တွေကိုထုတ်လွှင့်စွမ်းရည်ကိုဝင်ရောက်ဖို့အသုံးပြုနိုင်အောင် Cross-platform application ကိုရှိပါတယ်, အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အတူအင်တာနက်အသုံးပြုသူအရေအတွက်များတဲ့ဆကျသှယျဖို့အသုံးပြု tool များ၏စာရင်းထဲတွင်ရာအရပျ၏မာနထောင်လွှားကြာသော Android နှင့် / ဘို့ Vatsap clients များအပြင်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ, iOS - အောက်တွင် Windows အတွက်ကြည့် WhatsApp ကိုဖြစ်ပါတယ်။
windose များအတွက် Vatsap - ဤအင်တာနက်ကိုတဆင့်သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲတမန်တစ်ဦးအဖော်မိုဘိုင်းဗားရှင်းတစ်ခုကို standalone tool ကိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ဒီ app ကိုလိုအပ်ရင်ကြီးမားတဲ့အသံအတိုးအကျယ်နှင့် WhatsApp ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားဖိုင်တွေရဲ့ဗဟုမှစာသားမက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့နီးပါးမရှိမဖြစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်။
၎င်း၏အဓိကမှာ Windows အတွက် WhatsApp ကိုမိုဘိုင်း OS ကိုအောက်မှာလည်ပတ်မူသောသင်တို့စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet အသုံးပြုသူပေါ်တွင် install လုပ်ပြီးသားများနှင့် activated client ကိုလျှောက်လွှာ၏ "မှန်" ဖြစ်ပါတယ်။ activated ၏မရှိခြင်းနှင့် Vatsap messenger ကိုအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေမိုဘိုင်း version ကို desktop ကိုဗားရှင်းဖြန့်ချိ! ဒါကအချက်တစ်ချက်ဝေဖန်မှုတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့်တကယ့်အလွန်အဆင်ပြေမယ့်, ဒါပေမယ့်ဒေတာထုတ်လွှင့်သည့်အခါထိုကဲ့သို့သောလုံခြုံရေးများ၏တောင်းဆိုချက်များကိုဖြစ်ကြသည်။ conjugation မိုဘိုင်း devaysa အခန်းထဲကသုံးပြီးကွန်ပျူတာ screen ပေါ်မှာ clients များဖို့အတွက် QR-code ကို scan ဖတ်ခြင်းဖြင့်ဖျော်ဖြေသည်။
တစ်ဦးကသင်၏ဖုန်းတွင် WhatsApp ကိုအကြားလုံခြုံမှုရှိတဲ့ connection (တက်ဘလက်ကို PC) နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲသည် Windows-based version ကို install လုပ်ပြီးနောက်, လူအပေါင်းတို့သည်ဒေတာစနစ်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ရှေ့တော်၌တဆင့်မှတဆင့်ကူးစက်သော, သူတို့ကညှိပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအချိန်အများကြီးမယူပါဘူး, နှင့်သတင်းအချက်အလက်ယင်း၏တခုလုံးကိုမိုဘိုင်း device မှကူးယူနေသည် - စသည်တို့ကိုအဆက်အသွယ်များ, မက်ဆေ့ခ်ျကိုသမိုင်း, ပရိုဖိုင်းအပြင်အဆင်များ,
န်ဆောင်မှုအခြားအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူချိန်းမက်ဆေ့ခ်ျ Vatsap windose များအတွက်အဓိက function ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်မကြာမီမိုဘိုင်းနှင့်ဒက်စ်တော့ဗားရှင်းတမန်တို့အကြားအင်တာဖေ့စတည်လိမ့်မည်သကဲ့သို့, အသုံးပြုသူကိုချက်ချင်းစာပေးစာယူစတင်နိုင်ပါသည်။
chat box ကိုမလိုအပ်တဲ့ဒြပ်စင်နှင့်အတူပိမဟုတ်ပါ, သို့သော်လုပ်ဆောင်ချက်ကို၏မရှိခြင်းခံစားရပါဘူး - အဲဒီမှာရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနည်းဆုံးလုံလောက်သောသတ်မှတ်ချက်နှင့်သူတို့အသုံးပြုသူများ၏မြင်ကွင်းကို၏အချက်အနေဖြင့်အလွန်အဆင်ပြေဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။ ဥပမာ, ဆက်လက်တစ်ခုသို့မဟုတ်စကားဝိုင်းအသစ်ရဲ့အစကိုဘယ်ဘက် pane ထဲကကိုဆက်သွယ်မယ့်အမည်ပေါ်တွင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အထဲကယူသွားတတ်၏, ထိုသတင်းစကားကိုပေးပို့မယ့်အဓိကသော့ချက်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် « Enter » ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ - စာပေးစာယူလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်ဦးရိုးရှင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုစိတ်ကူးဖို့ခက်ခဲသည်။ function ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အသံမက်ဆေ့ခ်ျထုတ်လွှင် Vatsap PC ကိုရရှိနိုင်၏အဓိက window တွင်အခြားအမှုအရာများထဲတွင်။
Windows အတွက် WhatsApp ကိုအတွက်အဆက်အသွယ်များ၏စာရင်းမှအသုံးပြုသူတို့၏ access ကိုအတော်လေးပုံမှန်မဟုတ်သောဖွဲ့စည်းထားသည်။ တစ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်စာရင်းကိုကြည့်ပါနှင့်လက်ျာလူတစ်ဦးဖြစ်နိုင်မှာကြည့်ရှု "ဟန်းအောက်အသစ်".
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ရုပ်ပြောင်များအသုံးပြုခြင်းထက်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကို, အောင်ရန်မပိုကောင်းလမ်းလည်းမရှိ။ Windows အတွက် WhatsApp ကို၌ဤပြဿနာများ၏ဖြေရှင်းချက်တစ်စုံတစ်ရာအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး။ သင့်လျော်သော button ကိုနှိပ်ပြီးနောက်အသုံးပြုသူမက်ဆေ့ခ်ျကိုထည့်သွင်းဖို့မရရှိနိုင်အရည်အသွေးမြင့်ခြေရာကောက်ပုံငယ်များမှာများစွာသောအရေအတွက်တွေ့ရှိ။ အပြုံးပုံကပိုမိုလွယ်ကူယခုအချိန်တွင်လက်ျာ image ကိုရှာတွေ့မှအောင်အများအပြားအမျိုးအစားသို့ကျိုးပဲ့၏ထားကြ၏။
အထူးမှတ်ချက်၏ရယ်စရာ gif-ပုံရိပ်တွေပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်နှင့်အခြားပါတီစိတ်ဓါတ်များအားပေးစရာအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်, သောရွေးချယ်မှုတခုကျယ်ပြန့်စာကြည့်တိုက်ကနေထွက်ယူသွားတတ်၏။
မက်ဆေ့ခ်ျစာသားအပြင်, Vatsap အားဖြင့်သင်တို့ဖိုင်တွေ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။ ရုံစက္ကူကလစ်၏ပုံရိပ်နှင့်အတူခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်း, disc ကိုပေါ်ဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယို, သီချင်းသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းကိုရွေးပါ။ ဖိုင်တွေကိုနီးပါးချက်ချင်းအခြားပါတီမှကယ်နှုတ်တော်မူ၏လိမ့်မည်။
PC အတွက်ကဤစံဖိုင်အမျိုးအစားများ Vatsap အပြင်သင့်ရဲ့ webcam ကနေပုံရိပ်တွေကိုလွှဲပြောင်းရန်ခွင့်ပြုအဖြစ်စာရင်းထဲမှအဆက်အသွယ်တမန်မှထည့်ပြီးပါပြီ။
တစ်ဦးချက်တင်ရှာဖွေနေတဲ့အခါမှာဟန်းအောက်ကို window ၏သက်ဆိုင်ရာစာရင်းထဲတွင်ပွင့်လင်းဆွေးနွေးတစ်အမြောက်အများအချို့အဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဤအခြေအနေမှရှောင်ရှားရန်, Windows အတွက် WhatsApp ကိုရွေးချယ်စရာတစ်ခုနည်းလမ်းများတပ်ဆင်ထား developer များ, သင်ဆွေးနွေးမှုများကိုစုစည်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
အရေးကြီးချတ်နိုင် "Fix" စာရင်း၏ထိပ်ဆုံးနှင့်အမှန်တကယ်မြင်နိုင်၏စာရင်းထဲကဖယ်ရှားပစ်ရန်, ထွက်သယ်ဆောင်ကြပြီမဟုတ်သောသူတို့၏ပြောဆိုမှုများမှာ "မော်ကွန်း"။ နှင့်အညီ, သင်တန်း၏, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အဆက်အသွယ်နှင့်အတူစာပေးစာယူတဲ့အင်္ဂါရပ်ပြည့်စုံဖယ်ရှားရေးဖြစ်ပါတယ်။
personalization ကိုယ်ရေးဖိုင်ကို၎င်း, interface ကို configure
WhatsApp ကို၏မိုဘိုင်းဗားရှင်းနဲ့အမျှ, desktop ကိုဗားရှင်းအတွက်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်းကို personalize ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးထားပါသည်။ သင့်အနေဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုနာမကအခြားသင်တန်းသားများကိုမြင်နိုင်သည့်ကိုယ်ပွားပြောင်းလဲနှင့်အဆင့်အတန်းကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
လျှောက်လွှာကို interface ၏အသွင်အပြင်သည်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာကဒီမှာကန့်သတ်ထားပါသည် - မရရှိနိုင်နောက်ခံပြောဆိုမှုများအတွက်တစ်ခုသာပြောင်းလဲမှု။
များစွာသော messenger ကိုအသုံးပြုသူများကစိုးရိမ်ပူပန်အင်တာနက်မှတဆင့်မှတဆင့်ကူးစက်သောလျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးရှုထောင့်။ ဒီနေရာတွင်ကဖိုင်တစ်ဖိုင်ပေးပို့အပါအဝင်ဝန်ဆောင်မှု Vatsap အဆုံး encryption ကိုအသုံးပြုသူစာပေးစာယူတလျှောက်လုံးအသုံးပြုသည်အခါသတိပြုသင့်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်တန်းသားများကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောမျက်စိ prying မှကာကွယ်မှတဆင့်ကူးစက်သောသတင်းအချက်အလက်များထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် chat လို့ရပါတယ်။
မော်ဒန်နဲ့ရိုးရိုးရုရှား interface ကို;
လျှောက်လွှာများ startup လုပ်စစ်ဆင်ရေးများအတွက်မိုဘိုင်း device ကိုအသုံးပြုသူအပေါ်ပြေးတစ်ဦးကို client ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်ပါတယ်;
အဋ္ဌမဗားရှင်းကိုအောက်တွင် Windows ကိုထောက်ခံမှုမရှိခြင်း။
Windows အတွက် WhatsApp ကို - တစ်ဦးကိုကြိုဆိုနှင့်အသုံးပြုသူရဲ့မိုဘိုင်း device ကိုမှတပြင်လုံးကိုတော်တော်လေးကောင်းသော Vatsap ထို့အပြင်ပေါ်မှာ။ လျှောက်လွှာဆက်ဆက်လူကြိုက်အများဆုံးလက်ငင်းသံတမန်တဦးတည်းကိုသုံးပြီးမော်ဒယ်ချဲ့ထွင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာဤမျှလောက်များစွာသောဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲပလက်ဖောင်းမှအကျွမ်းတဝင်။
WhatsApp ကို Windows မှာအခမဲ့ Download
Android အတွက် WhatsApp ကို WhatsApp ကိုက c ကို Android-smartphone ကို, iPhone နှင့် PC ကိုမှတ်ပုံတင်လုပ်နည်း WhatsApp ကိုတွင် YouTube မှဗီဒီယို Send လက်ပ်တော့အပေါ် WhatsApp ကို install လုပ်နည်း
Windows အတွက် WhatsApp ကို - ကွန်ပျူတာနှင့်လက်တော့ပ်နှင့်အတူပေါ်ပြူလာဝန်ဆောင်မှုများ၏စွမ်းရည်များရန်သင့်အဖွဲ့အစည်းကိုလက်လှမ်းအတွက်အသုံးပြုသူများအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ eponymous တမန်၏ဗားရှင်း။
System ကို: Windows 8 8.1, 10
အမျိုးအစား: Windows အတွက် Messengers
ရေးသားသူ: WhatsApp ကို Inc မှ
Size: 133 MB အထိ
ဗီဒီယို Watch: Opera Mini Browser က သဖၾကသလ (နိုဝင်ဘာလ 2019).